Uhlobo lwesibili lwe-Xfce 4.16 seluyatholakala | Kusuka kuLinux
Uhlobo lwesibili lwesivivinyo se-Xfce 4.16 manje seluyatholakala
Ngonyaka odlule sabelane lapha kubhulogi izindaba zokuqala kwentuthuko ye izoba yini inguqulo entsha yemvelo yedeskithophu I-XFCE 4.16 futhi manje ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, ikhishwe inguqulo yesibili yesivivinyo I-Xfce 4.16 (pre2) imvelo yomsebenzisi.
Kanjalo, ukwenziwa kwale nguqulo entsha yeXFCE kubambezeleke impela Futhi akukhona ngoba kuyisifiso sabathuthukisi, kepha kunalokho okwenziwe phakathi nalonyaka kumele kubhekwe.
Mayelana nenguqulo yesibili ye-Xfce 4.16
Le nguqulo yesibili yesivivinyo segatsha elisha le- I-XFCE 4.16 ivelela ukuhunyushwa kwesixhumi esibonakalayo kuwijethi yeGtkHeaderBar kanye nohlelo lokuhlobisa uhlangothi lwamakhasimende (CSD), olwavumela ukubekwa kwamamenyu, izinkinobho, nezinye izinto zesixhumi esibonakalayo kusihloko sefasitela.
Ngaphandle kwalokho ku-XFCE 4.16 futhi ukuyeka ukuxhaswa kwe-GTK2 futhi yethule izinguqulo ezingokomfanekiso zezimpawu, izinto ezihlanganisiwe zesixhumi esibonakalayo esuselwa ku-GtkTreeViews.
Futhi Kushiwo ukuthi le nguqulo entsha ikhulise amandla omphathi wefayela leThunar, ikhulise amandla we-configurator futhi yaphakamisa i-combo plugin entsha yephaneli yendawo yesystray nezaziso.
Siyajabula ukumemezela inguqulo yesibili, futhi mhlawumbe eyokugcina, yokubuka kuqala
ngaphambi kweXfce 4.16.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi le nguqulo yesikhulumi - yohlu oluningiliziwe lwe-
changes, bona amanothi wokukhishwa wezinto ngazinye.
izinsuku okuthunyelwe kwebhulogi kuzoshicilelwa ngokubuka konke okuvelele
Kungezwe izithonjana eziningi zohlelo lokusebenza, yakhelwe ngokusho kohlelo lokuqamba igama i-freedesktop.org.
I-UPower ikhutshaziwe ngokuzenzakalela kusihlanganisi nakwisixhumi esibonakalayo sengxoxo sithuthukisiwe (ngokwesibonelo, kwengezwe amathuluzi wamathuluzi). Kungezwe inkinobho ethi "Vula nge ..." ukuze kuchazwe izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo.
Baqhakambisa nomsebenzi owenziwe ku ILibxfce4ui lapho ithebhu ethi "Mayelana" iphinde yahlelwa kabusha futhi i-interface yathuthukiswa ukumisa ama-hotkeys. Kungezwe i-API ukuqala izinqubo ezingemuva.
Iphaneli ikwenze ngcono ukuhanjiswa kwezithonjana futhi yenza ukubukeka kwayo kube kwesimanje.
Kwi-Power Manager, ukunemba kokubukwa kwesimo kwandisiwe (Esikhundleni samazinga amathathu, imininingwane yokulayisha manje iboniswa ngokunyuka okungu-10%.)
Ingxoxo enamasethingi eseshini ithuthukisiwe futhi isithonjana se-xfsm-lock sengeziwe, ngenkathi ukusekelwa komphumela wefayela likaThunar kuhlinzekwa kwizikhumba ze-GTK futhi i-plugin yamafayela we-epub ingezwe kuTumbler.
Ngaphezu kwezinguqulo ezilandelayo ze- izingxenye eziyinhloko ze-Xfce:
xfce4-dev- amathuluzi 4.15.1
Isikhathi se-xfce4 4.15.1
xfwm4 4.15.3 Amabhola e-tarball
Ekugcineni yebo banesithakazelo sokwazi okwengeziwe ngayo Mayelana nesimemezelo nezimemezelo ezizayo mayelana nale ndawo yedeskithophu, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Futhi kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukuzama le nguqulo yesibili yokuhlolwa kwe-XFCE 4.16 noma ufuna ukuyixhasa ngokuthola amaphutha, kunikezwe ikhodi yomthombo ukuze bakwazi ukuhlanganisa futhi bafake ezinhlelweni zabo.
Akukamenyezelwa okwamanje ukuthi kuzoba nohlobo lokugcina nolwesithathu lwezivivinyo ngaphambi kokukhishwa kwenguqulo ezinzile noma ngqo bazogxumela kuyo kusuka kule nguqulo yesibili.
I-4.16pre3 (iqhwa lokugcina) Le nguqulo ongayikhetha (iqembu lezinhlobo linquma ukuthi siyayidinga noma siyalishiya lithanda inguqulo yokugcina)
Kusukela le nguqulo entsha yemvelo kuhlelwe ukuthi ikhishwe maphakathi nonyaka, kepha uma kubhekwa izimo intuthuko ibambezelekile manje uma konke kuhamba kahle futhi ngokwekhalenda elishicilelwe abathuthukisi bezemvelo kulindeleke ukuthi baqalise ngoDisemba noma ngoJanuwari ngemuva kokwakhiwa kolunye uhlobo lwesilingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo lwesibili lwesivivinyo se-Xfce 4.16 manje seluyatholakala
IKali Linux 2020.4 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo